ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ Food Label ဖတ်ခြင်း | OnDoctor
ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ Food Label ဖတ်ခြင်း
By OnDoctor Editor	 On May 11, 2020
Food label ဆိုတာဘာလဲ?
Food label ဆိုတာ သပ်ရပ်သေချာစွာ စနစ်တကျထုတ်ပိုးထားတဲ့ အစားအသောက်တွေထဲမှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ( ကယ်လိုရီ ) ပမာဏ ပါဝင်မှု၊ အဆီဓါတ်ပါဝင်မှု၊ အသားဓါတ်ပါဝင်မှု၊ အမျှင်ဓါတ်ပါဝင်မှု အပြင် ရေဓါတ်၊ ဆားဓါတ်၊ သကြားဓါတ်၊ စတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေ ပါဝင်မှု အချိုးဘယ်လောက်လဲဆိုတာ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဂရမ် အလေးချိန်တို့နှင့် ဖော်ပြထားသော အစားအစာဖွဲ့စည်းပုံ အညွှန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အချို ့စားသောက်ကုန်တွေမှာ သက်စောင့်ဓါတ် ဗီတာမင်များ၊ သတ္တုဓါတ်များ ပါဝင်မှုကိုပါ ဖော်ပြတတ်ကြပါတယ်။
အစားအသောက်မဝယ်ခင် Food label ကိုဖတ်ကြည့်ဖို့ ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ?
Food label အစားအစာဖွဲ့စည်းပုံအညွှန်းကို ဖတ်ခြင်းအားဖြင့်
အစားအသောက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတာ နှိုင်းယှဉ်လို့ရနိုင်ခြင်း။
သင်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓါတ်ကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းတဲ့နေရာမှာ လွယ်ကူခြင်း။
သင်တစ်နေ့တာ လိုအပ်တဲ့ ကယ်လိုရီပမာဏ၊ အသားဓါတ်၊ အဆီဓါတ်တို့ကို တွက်ချက်စားသုံးတဲ့နေရာမှာ များစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်ခြင်း။ တနည်းအားဖြင့် ပြောရရင် သွေးတွင်းအဆီဓါတ်များနေသူများ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ချနေသူများအနေနှင့် အစားအစာတစ်ခုစားတော့မယ်ဆိုလျှင် food label ကိုသေချာဖတ်ပြီးမှ စားသုံးသင့်ပါတယ်။
ဗီတာမင်၊ သတ္တု ဓါတ်၊ အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများကို အလွယ်တကူ ရွေးချယ်စားသောက်နိုင်ခြင်း။
ရက်လွန်ဒိတ် ဖြစ်နေသော အစားအစာများစားသုံးခြင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်ခြင်း။စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများခံစားရနိုင်ပါတယ်။
Food label ကိုဘယ်လိုဖတ်ကြမလဲ?
အစားအစာဖွဲ့စည်းထုတ်လုပ်ပုံ အညွှန်းပုံသည် များသောအားဖင့် အစားအသောက်ထုတ်ပိုးထားသော အိတ် သို့မဟုတ် ဘူး၏ အနောက်ဘက်အခြမ်းဒါမှမဟုတ် ဘေးဘက်အခြမ်း တို့တွင် ထင်ရှားသောသင်္ကေတ များနှင့်ပါတတ်သည်။
ပါဝင်သော အစားအစာအလေးချိန် အပေါ်မူတည်၍ ကယ်လိုရီပမာဏ၊ အဆီဓါတ်ပမာဏ၊ အသားဓါတ်ပမာဏ၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အသေးစိတ်ရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ထိုအညွှန်းသည် အာဟာရဆရာဝန်တို့၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ရေးသားရသော အညွှန်း ဖြစ်ဖို့လိုအပ်သည်။ထိုအညွှန်းကို အစားအသောက်တစ်ခုခု ဝယ်တိုင်း သေချာဖတ်ရှုသော အလေ့အထကို မွေးမြူသင့်သည်။ မိမိရောဂါနှင့် တည့်သော အစားအစာကိုရွေးချယ်စားသုံးခြင်းသည်လည်းရောဂါကုသရာတွင် များစွာအထောက်အကူပေးသည်။
ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူဘက်မှ သေချာရေးသားမဖော်ပြထားလျှင်လည်း အစားအသောက်တွက်ချက်
စားသုံးသူများ အတွက် အခက်အခဲတွေ့တတ်သည်။ ကျောက်ကပ်သမားများ၊ အဝလွန်သမားများ၊ အာဟာရနည်းနေသူများအတွက် food label ဖတ်ပြီး စားသုံးခြင်းသည် အင်မတန်မှ အထောက်အကူပေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။